Uma ingekho imisebenzi, angeke sivote kusabisa omakadebona boMkhonto Wesizwe | Scrolla Izindaba
Uma ingekho imisebenzi, angeke sivote kusabisa omakadebona boMkhonto Wesizwe
Omakadebona boMkhonto weSizwe (MK) basabise ngokuthi angeke bayivotele i-ANC uma iqembu elibusayo liqhubeka nokwenza izethembiso ezingelutho.
Amakhulu omakadebona be-MK bavimbe umgwaqo onguthelawayeka u-N3 no-N2 ngesikhathi bemasha beya kwisiShayamthetho sesifundazwe eMgungundlovu izolo.
Bafuna ukuqashwa i-SAPS, i-SANDF, amaphoyisa ka-Metro, abezokuhlunyeleliswa kwezimilo, abe-Secret Service, kanye ne-Border Management Agency yezwe.
Bafuna nokuthi uhulumeni axhase amabhizinisi abo ngezezimali.
UZakhele Mhlongo, obeyingxenye yemashi uthe sebelinde isikhathi eside.
“Bahlale beze nezaba uma kukhulunywa ngomakadebona boMkhonto Wesizwe kodwa bayaphendula uma kungabanye abantu abakhonondayo,” kusho yena.
Omakadebona boMkhonto Wesizwe babambe uchungechunge lwemashi lokulwa nohulumeni wesifundazwe.
“Indlela esizojezisa ngayo i-ANC ukungabavoteli okhethweni. Mhlawumbe ngaleyo ndlela, bazobona ukuthi sikhathele izethembiso ezingenamsebenzi,” kusho elinye ilungu loMkhonto Wesizwe uMnuz Thulani Ngcobo.
“Besihlale sikhishwa inyumbazane. Asisakwazi ukubekezela manje. Sizolwa size sizwakale.”
Phambilini omakadebona bake banxenxa nokuthi abokufika baphume eNingizimu Afrika bebasola ngokweba imisebenzi okwakungeyabakuleli.
I-ANC eKZN ithe izobonisana nomakadebona boMkhonto Wesizwe, bese ithola isisombululo ngezikhalo zabo.